ရသာချို: "ငါးသလောက်ဟင်းနဲ့ သရက်သီးသုပ်"
Posted by ပါရမီဖြည့်ဖက်လေး at 10:07 PM
ဟင်းလေးကြည့်ရတာ စားချင်စရာ...။ အမရေ ငါးသလောက်ကို အင်္ဂလိပ်လို (စလုံးမှာ) ဘယ်လိုခေါ်လည်းဟင်? SHENG SIONG မှာ ဈေးဝယ်နေကျ ဒါပေမယ့် ဘယ်ဟာက ငါးသလောက်မှန်းမသိဘူးလေ။
စားချင်စရာလေး။ မန်ကျည်းနှစ်လေးနဲ့ ဆုိုတော့ပိုကောင်းမယ်နော်။
ငါးသလောက် မစားဖြစ်တာ ကြာပြီ..
စားချင်စရာလေးမို့ ထမင်းလေးနဲ့ နယ်စားလိုက်ချင်တာ..
ဒါနဲ့ ဒီအချိန်ထိ သရက်သီးစိမ်းရှိနေသေးတယ်နော်..
ကောင်းလိုက်တာ. ငါးသလောက်နဲ့ သရက်သီး..
ငါးသလောက်ကို Hilsa လို့ခေါ်တယ် ထင်ပါတယ်နော်..
CC ရေ။ မချောပြောသလိုပဲ ငါးသလောက်ကို Hilsa လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် SHEN SIONG မှာတော့ Chinese gizzard လို့ တံဆိပ်တွေ တပ်ပြီး ရောင်းပါတယ်။
အမချောရော၊ အမ ပါရမီဖြည့်ဖက်လေးရော ကျေးဇူးပါ။ နောက်နေ. ဈေးသွားမှ ရှာကြည့်ရဦးမယ်။ SHEN SIONG က တစ်ခါတစ်လေ တပ်ထားတဲ့ နာမယ်တွေက အပြင်မှာကိုယ်တွေခေါ်နေကြ နာမည်တွေနဲ.လည်း မတူဘူးနော်။